Ukuhlanganiswa nokuhlolwa kwe-OpinionLab Analytics | Martech Zone
Ukuhlanganiswa nokuhlolwa kwe-OpinionLab Analytics
NgoLwesithathu, ngoMashi 31, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
UmbonoLab kuyisiteji sokubamba imininingwane yamakhasimende ngocwaningo nangempendulo kuwebhusayithi yakho. I-OpinionLab iyibiza nge-Voice-Of-Customer (VOC) Data. I-OpinionLab manje inweba isethi yayo yezici ukuthi ifake zombili ukuhlanganiswa kwe-analytics nokuhlolwa. Lokhu kusiza kakhulu ukuhlanganisa impendulo yezivakashi zakho nemisebenzi yazo yesayithi.
Njengoba izindleko zokuthenga ikhasimende elisha ziphindwe kasithupha kuya kweziyisikhombisa kunalezo zokuligcina selikhona, kubalulekile ukuthi izinhlobo zebhizinisi zikwazi ukuhambisana nezimvo zabathengi abazibophezele akukaze kube nkulu ngale ndlela ,? kusho uRand Nickerson, oyi-CEO ye-OpinionLab. Ngenkathi iWebhu analytics nikeza ukuqonda okubalulekile kulokho izivakashi ezikwenza online, idatha ye-VOC eveza ukuthi kungani labo basebenzisi baziphatha ngendlela abaziphatha ngayo. Ngokwandiswa kwamathuluzi wethu wokuhlanganisa afakazelwe ukufaka amapulatifomu wokuhlola we-multivariate ne-A / B afana ne-Omniture Test & Target, imikhiqizo manje ingakwazi ukuqonda ungqimba oluqondene nekhasi ngqo analytics imiphumela yokuhlolwa. Ngaphandle kokukhomba impumelelo noma izindawo ezinenkinga ngokuyimpumelelo, izinkampani ziyakwazi ukusebenzisa ukufundwa okubalulekile kuyo yonke iWebhusayithi noma inhlangano yabo, zikhulise i-ROI yakho konke ukuhlolwa okwenziwayo.
Isibonelo, uma wakho analytics idatha yembula i-spike engazelelwe esilinganisweni se-bounce rate, ungahlanganisa imibiko yokuphawula kwamakhasimende ukuze ufunde ukuthi kungani abantu behamba. Noma, uma uthola isexwayiso esibonisa ukuthi izivakashi eziningi zekhasi ziveza imibono engemihle, ungachofoza kanye ukubuka okukodwa komsebenzisi analytics idatha noma isikhathi sokudlala.
The analytics Ukuhlanganiswa okwamanje kusebenza neWebTrends, TeaLeaf, Google Analytics, Omniture, CoreMetrics nabanye.
Tags: ucwaningo lwamakhasimendeilebhu yombonoumbonoidatha yezwiizwi lekhasimende
Douglas Karr Wednesday, March 31, 2010 Sunday, October 4, 2015
Indlela Engakhulisa Ngayo IHullabaloo! aka Cheated…
Weebly: Ukusingathwa Kwendawo Elula Ngokuphawulekayo ne-CMS